Elma Beganovich Maqaallo ku saabsan Martech Zone
Maqaallada by Elma Beganovich
Ms. Beganovich ayaa hogaamisa A&EDadaallada lagu dhisayo liiska shuraakada iyo macaamiisha adduunka caanka ka ah. Aaggeeda khibradda leh waxaa ka mid ah aqoonsashada doorka A&E ay u ciyaari karto noocyo kala duwan oo warshado kala duwan ah, iyo sidoo kale horumarinta shuruudaha iyo baaxadda iskaashigaas.
Sidee Xaqiiqda Kordhiyey u Saameyn ku yeelaneysaa Suuqgeynta Saameeyayaasha?
Khamiista, Oktoobar 15, 2020 Isniin, Janaayo 18, 2021 Elma Beganovich
COVID-19 wuxuu bedelay habka aan wax u adeegsanno. Iyada oo musiibo ba'an ay ka jirto banaanka, macaamiisha ayaa doorbidaya inay sii joogaan oo ay ka iibsadaan sheyga khadka tooska ah. Taasi waa sababta macaamiisha ay ugu sii kordhayaan saamileyaasha wax badan oo ka mid ah sida loo duubo fiidiyowyada wax kasta oo ka yimaada isku dayga lipstick-ka ilaa ciyaarista fiidiyowyada aan ugu jecel nahay. Wixii intaa ka badan oo ku saabsan saameynta masiibada ee suuq-geynta saamaynta iyo qiimaha, eeg daraasaddeena ugu dambaysay. Laakiin sidee ayey tani ugu shaqaysaa walxahaas ay tahay in la arko